Madaxweynaha Galmudug oo la kulmay odoyaal iyo waxgaradka Galmudug - Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweynaha Galmudug oo la kulmay odoyaal iyo waxgaradka Galmudug
Madaxweynaha Galmudug oo la kulmay odoyaal iyo waxgaradka Galmudug
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-qoor ayaa gelinkii dambe ee maanta kula kulmay magaalada Dhuusamareeb odoyaal iyo waxgarad ka soo jeedo Galmudug isagoo kala hadlay sidii ay gacan uga geysan lahaayeen socodsiinta maamulkiisa.
Qoraal ka soo baxay xafiiskiisa ayuu ku sheegay Madaxweyne Qoorqoor in kulanka uu la yeeshay odoyaasha iyo waxgaradka uu guul ku soo dhamaaday ayna u ballanqaadeen inay la shaqeyn doonaan maamulkiisa.
“Waxaan maanta kulan wadatashi ah la qaatay Odayaasha dhaqanka deegaanada Galmudug iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, waxa ay muujiyeen garab istaaga Maamulka cusub ee Galmudug si loo gaaro horumar iyo midnimo loo dhanyahay” ayuu lagu yiri qoraal kasoo baxay Madaxweynaha Galmudug.
Axmed Cabdi Kaariye Madaxweynaha Galmudug ayaa wajahaya culeysyo siyaasadeed oo kaga imaanaya dhinacyada diiddan dhismaha maamulkiisa ee u arka mid aan u dhameyn saamileyda Galmudug.
madaxweynaha galmudug oo la kulmay odoyaal